विदेशबाट आएकालाई कहाँ कहाँ राखिने ? कुन कुन मन्त्रीलाई दिईयो जिम्मेवारी ? – BikashNews
२०७७ जेठ २२ गते १९:०० विकासन्युज
विदशेबाट आएर सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टिन वा सेल्फ क्वारेन्टिनमा नजाँदासम्म बस्ने स्थान (होल्डिङ सेन्टर) झण्डै तीन हजार क्षमताको बनाइएको छ । सरकारले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा स्वदेश आउनैपर्ने परिस्थितिमा रहेका नेपाली शुक्रबारदेखि नेपाल फर्काउँदैछ ।
काठमाडौंमा तीन, ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा दुई सेन्टर निर्माण गरिएको छ । काठमाडौं र ललितपुरमा दुई होल्डिङ सेन्टर आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी जगेडामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरमा एक/एक हजार क्षमताका बनाइएको छ भने ललितपुरमा ९०० क्षमताका छन् ।
सरकारले काठमाडौंको यती पार्टी प्यालेस बसुन्धरा, स्काईजन पार्टी प्यालेस सुकेधारा र कुण्डलिनी पार्टी प्यालेस बसुन्धारामा होल्डिङ सेन्टर तयार पारेको छ जगेडाका रुपमा मिराकल पार्टी प्यालेस सुकेधारालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौंमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नागरिकलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा राखिनेछ ।
भक्तपुरमा एक हजार क्षमताका दुई पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । जसमा सूर्यविनायक नगरपालिका-५ कटुञ्जेस्थित इम्पेरियर बैंक्वेट र मध्यपुरथिमि नगरपालिका-४ स्थित हेरिटेज बैंक्वेट रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिए । यहाँ प्रदेश नं १ र २ का नागरिकलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा राखिने छ । प्रजिअ पाण्डेले भक्तपुरमा फोटोसहितको फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा राति बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने भएकाले आवश्यक बेडको समेत व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।
ललितपुरमा ९०० जनाका लागि डिलाईट पार्टी भेन्यू महाक्ष्मीस्थान र मण्डला पार्टी भेन्यू खरिबोट ग्वार्कोमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । यहाँ जगेडाका रुपमा सिद्धार्थ कलेज धोवीघाट तयार पारिएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले यहाँको होल्डिङस्थलमा आएका नागरिकलाई सरल र सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने विषयमा आवश्यक तयारीको काम पूरा गरिएको जानकारी दिए । यहाँको खाने बस्ने व्यवस्थापन भने सरकारले गर्नेछ ।
समग्र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ । अन्य काममा समेत सेनालाई सहयोगी भूमिकामा राखिएको छ । विमानस्थलबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर पुर्याउने र त्यसपछि होटल, क्वारेन्टिन, स्थानीय क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउनका लागि नेपाली सेनासहित प्रशासन, स्थानीय तह, यातायात व्यवस्थापन विभाग र प्रहरीको भूमिका रहेको छ ।
नेपाल प्रवेश गरेकालाई स्थानीय तहको क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलगायत त्यहाँ रहेका स्थानीय कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिले जिम्मेवारी लिनेछ । त्यसमा पनि सहयोगी भूमिका सेनाको रहनेछ । क्वारेन्टिनमा बसेकाको स्वास्थ्य परीक्षण सेनाको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्नेछ । विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याईएकाको समग्र मूल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तथा सञ्चालन, अनुगमन भने कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन (सिसीएमसी) ले गर्नेछ भने नेपाली सेनाको सहयोगी भूमिका हुनेछ ।